MIUI Zawgyi Font ( Font Replace Method: Global/China ) – Xiaomi Guide
သည်နည်းလေးကတော့ MIUI မှာ လွန်လေပြီးသောအချိန်ကတည်းက Xiaomi Theme Store ထဲမှာ Myanmar Zawgyi font တွေ မရှိသေးချိန်မှာကတည်းက Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ Zawgyi Font ကို ထည့်ခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ။ သိသူတွေလဲ များပါတယ်။ Xiaomi users အသစ်တွေလဲ များလာတော့ အခုအချိန်မှာ myanmar font က ပြောင်းသွားပြန်ပြီ။ Themes က ပြောင်းသွားပြန်ပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ သည်လိုတွေဖြစ်နေတာလဲ.. စတာလေးတွေကို နားလည်အောင်ရယ်.. မိမိဆီမှာ သုံးချင်တဲ့ Font ttf files လေးတွေ ရှိရုံနဲ့တင် ဘာ app တွေမှ လိုက်လုပ်နေစရာမလိုပဲ Global ROM မှာဆို ဘယ်လိုလုပ်မယ်.. China ROM မှာဆို ဘယ်လိုလုပ်မယ်.. ပြီးရင် ဘယ်လိုအခြေအနေလေး ဖုန်းမှာလုပ်ထားရင် မိမိ ဖုန်းမှာ Themes တွေ Font တွေ အဆင်ပြေနေမယ်.. Reboot လုပ်ချင်ရင် ဘယ်လိုပုံစံလေးထားပြီး လုပ်မယ်.. စတဲ့အထာလေးသိပြီး သုံးလို့အဆင်ပြေအောင်၊ ဘာကြောင့် ဘာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ သေသေချာချာသိရအောင်.. You မရပေမယ့် I ရတယ်ဆိုပြီး MIUI အထာမသိပဲ တစ်ဖက်ပိတ် Mi Funs တွေလဲ မဖြစ်ရအောင် ရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်။ 😀 😀
သုံးလို့ရအောင် လုပ်ကြတာတွေက နည်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းဆိုတာထက် MIU သဘာဝက Themes, Fonts တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုအထာရှိတယ်ဆိုတာ သိထားရင် သည်နေရာ သည်လိုလုပ်လိုက် ပြီးတာပဲပေါ့ ဆိုတာမျိုးနားလည်နေပြီး MIUI ကိုသုံးရတာ အဆင်ပြေမှာပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မိမိက Zawgyi font ကိုပဲသုံးမယ်.. ( လောလောဆယ် လူတိုင်းကလဲ ဒါပဲသုံးနေကြတာလေ.. အလိုက်အထိုက်ပေါ့နော့.. ဘာပုတယ် ညာပုတယ် ဖြစ်နေစရာ မလိုပါဘူး. 😀 😀 ) ဖုန်းထဲက မြန်မာစာ ရေး ဖတ် တာ ပါလာတဲ့ app တိုင်းမှာ အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ Root လုပ်ပြီး System fonts တွေမှာ zawgyi ပါတာ ချိန်းထည့်ထားဖို့မှတစ်ပါး ကျန်နည်းမရှိဘူးဆိုတာ နားလည်ထားစေချင်ပါတယ်။ Zawgyi, Unicode ဆိုပြီး စနစ်တွေကွဲနေသရွေ့ စာကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ ဟင်.. မှန်လဲမမှန်ဘူးဆိုတာတွေလဲ ရှိနေမှာပဲဆိုတာတွေ နားလည်ထားစေချင်ပါတယ်။ သုံးနေတဲ့အထာကျလို့ သတိထားမိနေရင်.. ဘာမှလုပ်စရာမရှိလို့ ပျင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးလေးတွေမှာ Unicode နဲ့စာရိုက်ရင် ဘယ်လိုပေါ်တယ်.. Zawgyi နဲ့ရိုက်ရင် ဘယ်လိုပေါ်တယ်ဆိုတာလေးတွေ တစ်နာရီလောက် ရိုက်ကြည့်ပြီး ကြည့်မိနေရင် Zawgyi သုံးထားလဲ Unicode နဲ့ရိုက်ထားတာတွေကို အမှန်မမြင်ရသော်လည်း ဘာရေးထားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ ခန့်မှန်း ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်ဗျာ.. ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်စာလို ဖတ်ရတာမဟုတ်တောင် Facebook posts, comments လောက်မှာတော့ သူတို့ ဘာရေးထားတယ်ဆိုတာမျိုး ဖတ်ရုံသက်သက်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ကိုယ်လုပ်တာတွေမှာ သတိလေးထားပြီးလုပ်နေရင် အထာပေါက်ပါတယ်.. 😀 😀
MIUI မှာ MIUI version 9.5 ကနေစလို့ အဲဒါနဲ့အဲဒါနောက်ပိုင်းမှာ Xiaomi အနေနဲ့ Theme Store မှာရှိတဲ့ Themes, Fonts တွေမှတစ်ပါး မိမိမှာရှိနေတဲ့ mtz files ( mtz file format က Xiaomi Themes, Fonts တွေရဲ့ file format ပါ။ အမှန်ကတော့ Zip file ပါပဲ။ File Extension က mtz လို့ဖြစ်သွားတာလေးပါ။ အထဲမှာ File, Folder Structure ဘယ်လိုရှိရမယ်.. Naming system အရ နာမည်တွေဘယ်လိုပေးထားရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ file လေးတစ်ခုပါပဲ ) တွေကို ဟိုးအရင်ကလို Themes app -> Import ကနေပြီး ထည့်လို့မရတော့ပါ။ Import တာ ရပါတယ်. သုံးဖို့ Apply မရတာပါ။ ခွင့်မပြုတော့တာပါ။ လုပ်လိုက်ရင် Third Party resources တွေကို ထည့်ခွင့်မပြုပါဆိုတဲ့ Error message ကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဟိုးအရင် MIUI တွေမှာတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ သူ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ structure အတိုင်းကိုက်ညီတဲ့ mtz files လေးတွေ ရှိရင် Import လုပ်သုံးရုံပါပဲ။ နောက်ပိုင်း ( MIUI7လောက်လို့တော့ထင်တာပါပဲ.. ) မရတော့ပါ။ Designer Account ဆိုတာ လိုလာပါတယ်။ ရပြီဆို OK ပါပြီ။ Import လုပ်ပြီးသုံးရုံပါပဲ။ MIUI9လောက်ရလာချိန်မှာတော့ Designer Account လဲ အဲလိုတွေအတွက် အသုံးမဝင်တော့ပါ။ အဲသည်ဟာ ရှိထားရင် မိမိအနေနဲ့ Themes, Fonts တွေဖန်တီးလို့ရမယ်။ အဲဒါတွေကို Xiaomi Themes Store ဆီကို တင်နိုင်မယ်။ Xiaomi ဖက်က Approve လုပ်ပေးချိန်မှာ မိမိလုပ်ထားတာတွေ Themes app ထဲမှာပေါ်မယ်။ Xiaomi users တွေက download လုပ်ပြီးသုံးနိုင်မယ်။ မိမိကလဲ Mi Credits နဲ့ရောင်းမယ် သို့မဟုတ် Free ပေးမယ်ဆိုပြီး စကတည်းက လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Designer Account က အဲလိုအတွက်ပဲ အသုံးဝင်ပါတော့တယ်။ Theme Store မှာ Zawgyi font တွေလဲ မရှိတော့ပါဘူး။ ဖျက်လိုက်ပါပြီ။ အစအန hidden လေးကျန်နေတာလေးတွေတောင် စိစစ်လိုက်ရှာဖျက်ထုတ်နေပါတယ်…။ ဒေါင်းဖို့ဆိုပြီးလဲ ရှာလို့မရတော့ပါဘူး..။
ဒါကြောင့်မို့ အခုချိန်မှာ MIUI မှာ Zawgyi font ထည့်လို့ရအောင် apps မျိုးမျိုးတွေသုံးပြီး လုပ်ကြပါတယ်။ အသုံးများကြတွေကတော့ TTA, ZFont, MIUI Themes Editor, My Themer, Mi Rape apps လေးတွေပါပဲ။ Google play store မှာရှိတဲ့ app လေးတွေကို အောက်မှာ screen shot ပြထားပါတယ်။ ZFont, Mi Rape တို့ကတော့ သတ်သတ်လင့်တွေအနေနဲ့ share ပေးနေကြတာ Facebook Xiaomi Groups တွေထဲမှာရှိပါတယ်။ ကျနော့် blog ထဲမှာလဲ blog search box မှာ fonts လို့ရိုက်ရှာရင် fonts နဲ့ပတ်သက်တဲ့ posts တွေ ထွက်လာမှာပါ။ အဲသည်မှာ MIUI Themes Editor နဲ့ Custom Fonts, Themes တွေ ဘယ်လိုထည့်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ ရေးပေးထားပါတယ်။ အခု MIUI Versions တွေ.. အခုအချိန် MIUI Theme Editor app update နဲ့ သူ့အစွမ်းနဲ့သူတော့ထက်ပါတယ်။ Fonts ကိစ္စအသာထား၊ Custom Themes တွေ ထည့်သွင်းချင်တာမျိုးမှာ သူနဲ့စမ်းသပ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ လိုက်လေ့လာကြည့်ပါ။ ကျနော် အမြဲတစေသုံးလေ့ရှိတဲ့အရာမဟုတ်တော့ ဘယ်လိုတွေ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ idea တွေကိုပဲ စမ်းသပ်ရင်း ရေးပေးထားတာပါ။ မိမိဖာသာ ဘယ် MIUI Version နဲ့ဆိုဘယ်လို.. Global / China ဆို ဘယ်လိုကွာတယ်… ဘယ်လိုအထာနဲ့ထည့်သွင်းသုံးရတယ်ဆိုတာကတော့ မိမိဖာသာ စမ်းသပ်လေ့လာယူရမှာပါပဲ..။ သည် app တွေသုံးပြီး Fonts, Themes တွေ ထည့်တာကတော့ ဘယ် app က ဘယ်လိုအထာရှိတယ်ဆိုတာ မိမိဖာသာ ရှာဖွေစမ်းသပ်ပါ။ ဘယ် app ကတော့ Fonts ထည့်တာ အဆင်ပြေတယ်၊ ကိုယ့်ဆီရှိတဲ့ themes, fonts တွေ ပျက်သွားတယ်။ ဘယ် app ကတော့ Global rom မှာ မရဘူး။ ဘယ်ဟာကတော့ Beta rom မှာ မရဘူး။ ဘယ် app ကတော့ Themes app ထဲက ဝင်ရှာလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး… စတဲ့ အထာတွေ သိမြင်လာပါလိမ့်မယ်။
ပထဆုံး ဘယ် rom မှာ Font ကို ဘယ်လို Replace လုပ်မယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်ခင်ဗျာ.. ။ ပြီးရင် Themes, Fonts တွေ အထာထာကျကျသုံးလို့ရအောင် ဘယ်လိုပုံစံ လုပ်သုံးမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်ခင်ဗျာ.. ။ ပြီးရင်တော့ ဘယ်လိုကြုံတာ ဘာဖြစ်လို့.. ။ ဘယ်လိုပြန်လုပ်.. စတဲ့အထာလေးတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။
For Global ROM
Global rom ဆိုတာ ဘယ်နားကြည့်ပြောတာလဲ.. ကိုယ့်ဖုန်းက Global rom တင်ထားတာလား.. ကိုယ်က သည်နည်းလိုက်လုပ်ရမှာလား ဆိုတာ အရင်ခွဲခြားသိဖို့ သည်လိုကြည့်လိုက်ပါ။ MIUI Version ဆိုတဲ့နေရာမှာ Global ဆိုတဲ့ စာသားတွေ့ရင် Global ROM လို့မှတ်ပါ။ Global ဆိုတဲ့ စာသားမပါရင်တော့ China ROM လို့သာမှတ်ပါ။ ကျန်တာတွေ ကြည့်နေစရာမလိုပါဘူး။ အမှန်တော့ Settings ထဲဝင်တာနဲ့ ထိပ်ဆုံးနား About Phone မှာ MIUI Version ကိုတွေ့မှာပါ။ Global ROM ဆို အဲသည်မှာ Global ဆိုတဲ့စာသားလေး ပါနေတာတွေ့မှာပါ။ မပါရင် China rom ပါပဲ။ အခုပုံစံက MIUI 10 တွေနဲ့ MIUI9Version အမြင့်ပိုင်းတွေပါ။ MIUI 9.2 လောက်နဲ့သူ့အောက်နိမ့်တွေလောက်မှာတော့ About Phone ထဲတစ်ဆင့်ဝင်သွားပြီး ကြည့်ရအုံးမယ့်ပုံစံရှိပါတယ်။
အမှန်တော့ Global ROM အတွက် Zawgyi Font နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်ခေါင်းခြောက်စရာ မရှိပါဘူး။ အောက်ပါပုံအတိုင်း Settings -> Additional Settings -> Region နေရာမှာ Myanmar ကိုထားပေးလိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်း…
ထားလို့တော့ ပြိးပြီ….။ Font က ဘယ်နားသွားရွေးချိန်းရမှာလဲ…။ အောက်ကပုံအတိုင်းပါခင်ဗျာ။ China ROM မှာဆိုရင်တော့ အောက်က ပုံအတိုင်းလုပ်လဲရတယ်။ Settings -> Display ထဲမှာ သွားချိန်းလဲရပါတယ်။ Global ROM အတွက်ကတော့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းပဲ။ Settings -> Display ထဲမှာ ဝင်လုပ်စရာနေရာမရှိပါ။
ဒါဆိုရင် Global ROM မှာ Zawgyi font ဆိုတဲ့ကိစ္စ အဆင်ပြေပါပြီ။ Themes ချိန်းသွားမှာလား.. Reboot ရင် Font ပြောင်းမှာလား.. စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Zawgyi X1 ဟာ Xiaomi က official support ပေးထားတဲ့ Theme Font တစ်ခုဖြစ်လို့ပါ။ ဖုန်းထဲမှာ Mi Account ဝင်မထားလဲ အထက်ပါပုံတွေအတိုင်း Region နေရာချိန်းရင် ဝင်ရွေးပေးလို့ရပါတယ်။
Global ROM မှာ အထက်မှာပြထားသလို Zawgyi X1 ကို မသုံးချင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Font ကလှတယ်မထင်လို့…။ သူက Characters အစုံလိုလဲ မပါတော့ English စာလုံး အတွန့်အတက်တွေ (Extended Characters တွေလို့ခေါ်တာပေါ့) စတာတွေကို မမြင်ရတာ လေးထောင့်တုံးဖြစ်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာလုံးတွေတော့ အကုန်စုံအောင်မြင်ရပါတယ်။ အဲလိုအတွက် မိမိစိတ်ကြိုက် Font အလှလေး အစားထိုးထည့်သုံးချင်တယ်ဆိုရင် သည် Post ခေါင်းစဉ်ပါအတိုင်း Font Replace method လေးနဲ့လုပ်တာ လိုလာပါပြီ။ ဒါကိုလုပ်ဖို့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို စပြင်ဆင်မယ်ဆိုတာကို ပုံလေးတွေနဲ့ တစ်ဆင့်ချင်း ကြည့်သွားရအောင်ခင်ဗျာ….။
အတိုချုပ် ရှင်းပြရရင်တော့ Xiaomi က သူ့ Themes store ထဲက Font တွေပဲ ထည့်ခွင့်ပြုလို့ သူ့ Theme Store ထဲက Free font တစ်ခုဒေါင်းမယ်။ အဲသည် font file နာမည်အတိုင်း မိမိမှာရှိတဲ့ font ttf file ကို နာမည်ပြောင်းမယ်။ ရှိနေရမယ့် Folder ထဲမှာ ကိုယ့် font file ကို သွားထည့်မယ်။ ဒါ အကျဉ်းချုပ်ပါ။
သည်တော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Font TTF File ရှိရပါမယ်။ ဖုန်းမှာလဲ Mi Account ဝင်ထားရမယ်ခင်ဗျ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ Theme Store ထဲကနေ free font တစ်ခုကို ဒေါင်းမှာဆိုတော့ Mi Account ဝင်ထားမှ ဒေါင်းလို့ရပါလိမ့်မယ်။
သည် Blog ထဲက Myanmar Font Posts တွေမှာ ကျနော်လုပ်ထားတဲ့ Simple Zawgyi, Zawgyi Redefined fonts လေးတွေကို Share ပေးထားပါတယ်။ TTF file အနေနဲ့ရော MTZ file တွေ အနေနဲ့ပါ တွေ့မှာပါ။ MTZ file နဲ့ဆိုရင်လဲ နောက်ဆုံးက .mtz ဆိုတာကို .zip လို့နာမည်ပြောင်း၊ ဖြည်ချ၊ Font ဆိုတဲ့ Folder အောက်မှာ Roboto-Regular.ttf ဆိုတာတွေ့မှာပါ။ အဲဒါ Myanmar Font file ပါပဲ။ သည်မှာ PCloud ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Simple Zawgyi Font TTF/MTZ files လေးတွေ ပါတဲ့ link တစ်ခုတော့ share ပေးပါမယ်။ TTF တွေ ပါလို့ တိုက်ရိုက် ခုနည်းအတိုင်း ချိန်းသုံးတာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ် Font က ဘယ်လိုပုံစံကတော့ မိမိဖာသာ ထည့်ပြီး ကြည့်ယူပါ။ ဒါမှမဟုတ် mtz တွေကို zip ပြောင်းဖြည်ရင် Preview folder ပါပါတယ်။ အဲသည်ထဲမှာ ပုံ file လေးတွေပါပါတယ်။ Font ပုံစံ ဘယ်လိုဆိုတာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Download Simple Zawgyi Fonts
[ –> Simple Zawgyi Fonts <– ]
Global ROM မှာ Themes app ထဲဝင်ရင် Free themes တွေပဲ Download လုပ်ဖို့ပါပါတယ်။ Free Font တွေ download လုပ်ဖို့မပါပါ။ သည်တော့ Fonts တွေ ဒေါင်းဖို့နေရာပေါ်လာအောင် ပြင်ပေးရပါမယ်။ အဲသည်အတွက် Region နေရာ India ကိုထားပေးပါ။ ဒါဆိုရင် Themes app ထဲမှာ Font ဒေါင်းဖို့ပေါ်လာပါပြီ။
Region နေရာမှာ India ကို သည်လိုချိန်းပေးပါ။
အဲလိုဆိုရင် Free Font တစ်ခုဒေါင်းလို့ရပါပြီ။ Global rom Themes app ဆိုတော့ တွေ့တာအကုန် Free တွေပါပဲ။ Global ROM မှာ ရောင်းတယ်ဆိုတာတွေတော့ သိပ်မရှိလှပါ။ အောက်ပါပုံလေးအတိုင်း Themes App ထဲကနေ Fonts ဒေါင်းဖို့နေရာသွားလိုက်ပါ။ Free Font တွေ ပေါ်လာပါမယ်။ တစ်ခုကိုဒေါင်းဖို့ရွေးလိုက်ပါ။
Download လုပ်လို့ပြီးရင် Apply လုပ်လိုက်ပါ။ Reboot လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ Home Key သာ နှိပ်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်ပါ။ Font နာမည်ချိန်းတာ လုပ်ဖို့ အဆင့် စတင်နိုင်ပါပြီ။
How to Replace Font File
ပြီးရင်တော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Zawgyi font TTF က ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေရပါမယ်။ ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ font လေးကို သွားရှာရမှာတွေ နာမည်အစားထိုးချိန်းထည့်တာတွေ လုပ်ဖို့ Mi File Manager ကို အောက်ပါပုံလေးတွေထဲကအတိုင်း ပြင်ဆင်ပေးထားရပါမယ်။ Themes, Fonts data တွေက Hidden အနေနဲ့ လုပ်ထားတော့ Mi File Manager မှာ Hidden Files တွေ ပြဖို့ ON ပေးထားမှာ ရှာလို့ရမှာပါ။ အခြား File Manager app တွေသုံးရင်လဲ Hidden files တွေမြင်ဖို့ Setting ထဲမှာ ON ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ idea ရရင် ရပါပြီ။ ကျနော်က MIUI 10 Mi File Manger app မှာ လုပ်ပြထားတာပါ။ အခြား MIUI အနိမ့်တွေဆိုရင်တော့ ပုံစံလေးတော့ကွဲမှာပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်း Settings ထဲဝင်ဖို့ Screen အပေါ်ထောင့် ဘယ် ညာတွေမှာ အစက်လေးသုံးစက်.. အတန်းလေးသုံးတန်း..စသည်ဖြင့်ကိုရှာပေါ့….။
ဒေါင်းထားတဲ့ font ကို စရှာပါမယ်။ ရှိတဲ့ Location ကတော့ Internal Storage / MIUI / theme / .data / content ထဲက fonts ဆိုတဲ့ Folder အောက်မှာပါ။ အခြားသော မိမိထည့်ထားတဲ့ Fonts တွေရှိခဲ့ရင်တော့ files အများကြီးတွေ့နေမှာပါ။ files တွေက .mrc ဆိုတာနဲ့ဆုံးပါတယ်။ file တွေမှာ Date/Time လေးတွေ အောက်မှာပြပေးပါတယ်။ files တွေများနေရင် နာမည်အစလေးငါးလုံးလောက်လဲ မှတ်ထားလိုက်ပေါ့။ ပြီးရင် file ဖျက်ရမည်လေ…။ Files တွေများရင် မိမိဒေါင်းခဲ့တဲ့ ရက် အချိန်ကို ကြည့်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ file ကိုရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ လုပ်ရမှာက filename အပြည့်အစုံကို Clipboard ဆီကို Copy လုပ်ရမှာပါ။ ( Clipboard ဆိုတာ Android ရဲ့ Cache Storage တစ်ခုလို့ မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ရှာဖွေကြည့်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ပါ။ ) Filename copy လုပ်ဖို့ file ကိုရွေးပြီးရင် Rename ဆိုတာနှိပ်မယ်။ Filename ပေါ်လာရင် အကုန် Select All ပေးပြီးရွေးလိုက်ပါ။ အောက်ပါပုံလေးတွေအတိုင်းပါ။
Select All ပေးပြီး ရွေးထားတာလေးကို Clipboard ဆီ Copy လုပ်လိုက်ပါ။ file လေးကို ဖိပေးလို့ရွေးပြီး Delete လုပ်လိုက်ပါ။
မူလ filename ကူးလာပြီးရင် မိမိသုံးချင်တဲ့ file ကို အဲသည် နာမည်ပေးပါမယ်။ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ font file ကို ရွေးပြီး Rename လုပ်ပါ။ ရှိသင့်တဲ့ မူရင်းနေရာ ပြန်ထားပေးပါ။ အောက်ပါပုံလေးတွေ ကြည့်လုပ်ပါ။
နာမည်ချိန်းပြီးသား မိမိ file လေးကို ဖိပြီးရွေး…။ မူလရှိရမယ့်နေရာ Internal Storage / MIUI / themes / .data / content / fonts အောက်မှာ သွားထည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ..။ ဒါဆိုရင် မိမိတို့လုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေ ပြီးဆုံးပါပြီ။
ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Font ကို ရွေးဖို့အတွက်တော့ Global ROM ဖြစ်လို့ Themes app ထဲကနေတစ်ဆင့်သွားတာလုပ်ရမှာပါ။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းဝင်ပြီးရွေး… Apply လုပ်.. Reboot လုပ်ရင် မိမိသုံးချင်တဲ့ စာလုံးပုံစံပါတဲ့ Font လေးကို သုံးဖို့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
Region နေရာမှာ ကိုယ့် region နေရာ ဖြစ်တဲ့ Myanmar ပြန်ထားရင်လဲရပါပြီ။ Free font တစ်ခုဒေါင်းချင်ရင် India ထားပေးရင် Fonts ဒေါင်းဖို့ Themes app မှာပေါ်မယ်ဆိုတဲ့ Idea ရရင် ရပါပြီ။ ကျန်အချိန်များမှာတော့ Region အမှန်သာ ထားပေးထားပေါ့။ ဒါမှ Data/Time settings တွေ Auto အဆင်ပြေစေမှာပါ။
ကျနော်တင်ထားတာတော့ Global ROM ပဲ။ Region နေရာမှာ China ဆိုတာပဲဖြစ်နေတယ်။ ချိန်းမရဘူး။ Themes တွေ ဒေါင်းတာလဲ Themes တွေမှာ တရုတ် Themes တွေပါနေတယ်။ ဒေါင်းလို့လဲမရဘူး.. စသည်ဖြင့် ကြုံနေပါက အဲဒါသည် ဖုန်းကို Boot Loader Unlock လုပ်ပြီး Global fastboot rom မတင်ပဲ Xiaomi Tool လိုမျိုးနဲ့ အလွယ်တင်ခဲ့မိတာမျိုးကြောင့်ပါ။ အဲလိုအတွက်က BLU လုပ်ပြီး fastboot rom ပြန်တင်ပေးမှ မူရင်းလို အဆင်ပြေပြေဖြစ်စေပါမယ်။ Official Global အလုံးတွေ… BLU လုပ်ပြီးမှ China rom ကနေ Global rom ချိန်းထားတဲ့ အလုံးတွေကတော့ Themes, Fonts နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ဘာမှ error မဖြစ်ပါ။ အထက်မှာပြောခဲ့သလို အဆင့်ဆင့်ဝင်တာတွေလဲ လိုသလို အကုန်ပေါ်လို့ လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
သည္ေလာက္ဆို Global ROM မွာ မိမိအသုံးျပဳခ်င္တဲ့ Font ေလးခ်ိန္းသုံးတာလုပ္ဖို႔ အဆင္ေျပပါၿပီ။ China ROM မွာဆို ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာေလး နဲနဲဆက္လိုက္မယ္ခင္ဗ်ာ….။ ေနာက္ဆုံးပိုင္းမွာမွ သုံးေနရမယ့္ အထာေလး.. ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနတတ္တယ္ဆိုတဲ့ အထာေလးေတြကို ဆက္ေျပာရင္ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားပါမယ္….။
For China ROM
China ROM တွေအတွက်တော့ Settings ထဲမှာ ထူးထွေ ပြင်ဆင်ရတာ မရှိလှပါဘူး…။ ဖုန်းမှာ Mi Account ဝင်ထားရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Themes Store ကနေ ဘယ် Themes, Fonts တွေကိုမဆို ဒေါင်းချင်ရင် Mi Account ရှိရပါမယ်။ ဝင်ထားရပါမယ်။ အဲသည် idea လေး မှတ်ထားပေးပေါ့။ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Zawgyi font ttf file ဖုန်း Internal Storage ထဲကူးထည့်ထားရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် စလုပ်လို့ရပါပြီ။
Global ROM မှာ လုပ်တာနဲ့ တူတူပါပဲ… Global rom က Region နေရာ India ကို အရင်ဝင်ထားပေးရတာလေး တစ်ခုသာပိုတာပါ။ ကျန်တာတွေက အတူတူပါပဲ။ ကိုယ်မြင်ရတာလေးတွေ ကွာတာပဲရှိပါတယ်။ Themes App ထဲကို ဝင်လိုက်ပါ။ T နေရာလေးနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒါ Font နဲ့ပတ်သက်တာပါ။ Search box မှာ free လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ Fonts ဆိုတာအောက်မှာ Free fonts တွေ တွေ့ပါမယ်။ Download ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ Apply လုပ်လိုက်ပါ။ Reboot လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ လုပ်မလား လာမေးတဲ့ဆီမှာ Cancel နှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်ရင် ရပါပြီ။
Free ရတဲ့ font တစ်ခုကို Theme Store ထဲကနေ ဒေါင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ Global ROM မှာ လုပ်နည်းရေးထားတဲ့အတိုင်း How to Replace Font ဆိုတဲ့နေရာကနေစပြီး လုပ်တဲ့ပုံအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။ China ROM မှာ မိမိသုံးချင်တဲ့စာလုံးပုံစံလေးတွေ ပါတဲ့ Font ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
MIUI မှာ MIUI 9.5 မှာကတည်းက Custom themes, fonts တွေထည့်တာ Policy အရ ပိတ်ခဲ့တာ ကိုယ်သိပြီ။ တိုက်ရိုက် Import -> Apply ဆိုတာ လုပ်မရတော့တာသိပြီ။ Zawgyi fonts နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်း Themes Store ထဲမှာ ရှာလို့မရတော့…ဒေါင်းလို့မရတော့ ဆိုတာလည်း နားလည်ပြီးပြီ..။ အထက်ဆုံးမှာ ပြောခဲ့လို့လည်း ဘယ်နည်း ဘယ် app တွေသုံးလိုက်လုပ်ရတယ်ဆိုတာလဲသိပြီ။ အဲသည်ထဲကမှ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Font file လေးကို ဘယ်လို အစားထိုးထည့်သုံးရမလဲဆိုတာလဲ သိပြီ ( Font ထည့်ပုံနည်းများစွာထဲက တစ်ခုပေါ့။ ကျန်တာတွေက အခြားသော App တွေ အကူအညီယူထည့်တာပါ။ ဒါကတော့ မိမိဖာသာ Manual လုပ်ဆောင်သည်ပေါ့….)။ ထည့်ခွင့်မပေးတာကို ရအောင်တော့ ထည့်ပြီးပြီ။ ဘယ်လိုအထာလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဆက်ပြီးသိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်…..။ Themes, Fonts တွေ သုံးခွင့်ပြုနေသရွေ့ ဒါမျိုးက root မလို ထည့်လို့တော့ ရနေမှာပါပဲ။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုလောက်ထိတော့ zawgyi font ကို ရေး ဖတ် ဖို့ပြေလည်နေမှာပါပဲ။ Root နဲ့လုပ်တာလို ၉၅% လောက် ကျေနပ်မှုတော့ မရနိုင်ဘူးပေါ့။ ၇၀% လောက်တော့ အဆင်ပြေတယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ သုံးချင်တဲ့ Font ကို Apply လုပ်ပြီး Reboot ပြီးပြန်တက်လာပြီ။ သုံးလို့ရနေပြီ။ Themes ကလည်း အစကတည်းက မိမိစိတ်ကြိုက်ထားထားတယ်ဆိုပါတော့။ အားလုံးက အိုကေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Default Theme ကိုပဲ ပြန်ချိန်းသွားပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာလဲ…??? ဖုန်းကို မသုံးပဲ သည်တိုင်းသာထားလိုက်…။ အချိန်ကြာကြာလေးထားပြီးမှ Lock screen ဖွင့်လိုက်။ Theme က Default ဖြစ်ပါပြီ။ Theme ချိန်းသုံးထားရင် သိသာပါပြီ။ ဖုန်းကိုလဲ ကျနော်တို့လို မနက်ရုံးလာကတည်းက အိပ်ထဲသည်တိုင်းထည့်လာတယ်.. ညနေအိမ်ပြန်ရောက်လောက်မှ Lock screen ဖွင့်တာမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင် သည် Deep Sleep effect က ကောင်းကောင်းဖြစ်နေပါပြီ.. 😀 😀 ( Mi A1 ပဲ အမြဲသုံးဖြစ်နေလို့ MIUI နဲ့ဖုန်းတွေ သိပ်မဖွင့်ဖြစ်တာလဲ ပါတာပေါ့လေ… 😀 ) .. အဲလိုဖြစ်ပေမယ့် Themes ပြောင်းသွားတယ်။ မိမိချိန်းထားတဲ့ Themes မဟုတ်တော့လို့ ပြောင်းသွားတာ မြင်တာနဲ့သိပါတယ်။ Font ကလည်း Default Font ကိုပြောင်းသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို တမင်သက်သက်ဝင်မကြည့်ရင် မသိပါဘူး။ ကိုယ်သုံးနေကြ facebook တွေ ဘာတွေသုံး၊ စာတွေရိုက် အဆင်ပြေနေတာပါပဲ။ ဘယ်အချိန်မှာ Font ပြောင်း effect ကဖြစ်လဲဆိုရင် Reboot လုပ်မှပါ။ အဲလိုဆိုရင် Font ကပါ အစကတည်းက Default Font နေရာဖြစ်နေလို့ ပြန်တက်လာချိန် Unicode နဲ့ မြန်မာစာတွေ ဖြစ်ပါပြီ။ Zawgyi သုံးချင်ရင် Themes->Fonts (Global ROM မှာပေါ့) (OR) Settings->Display->System Font ထဲ ဝင်ပြောင်းပေးဖို့လိုပါပြီ။ Default Theme ပဲသုံးနေသူတွေအဖို့ သည် Effect ကို မသိပါဘူး။ Zawgyi font က ရေးဖတ်လို့ရနေဆဲပါ။ ဘယ်အချိန်မှ သိမလဲဆို Reboot လုပ်မှ Unicode ဆီပြောင်းသွားလို့ zawgyi font တွေ ရေး ဖတ်လို့ မမှန်တာ သတိထားမိမှာပါ။
Deep Sleep ဖြစ်ပြီး Lock screen ပြန်ဖွင့်ချိန် အောက်ပါပုံလေးထဲကလို အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာပါ။
အဲလိုဖြစ်နေချိန် မိမိစိတ်ကြိက် Theme လေး ပြန်သုံးချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်းသာ ဝင်ချိန်းထားပေးပြီး သုံးလိုက်ပါ။ ဖုန်းကို Reboot မလုပ်သရွေ့ Zawgyi font တွေလဲ မြင်ရ ရေးလို့ရပြီး အေးအေးဆေးဆေး သုံးနေလို့ရပါပြီ။
China ROM အတွက် သည်လိုဝင်ပြီးတော့သာ မိမိသုံးချင်တဲ့ Themes ကို ပြန်ချိန်းသုံးလိုက်ပါ။
Global ROM အတွက် ကိုယ့်ဆီရှိတဲ့ Themes တွေဆီဝင်ပြီး ချိန်းချင်ရင် သည်လိုပုံစံပေါ့ခင်ဗျာ….။
အခုလို Themes တွေချိန်းတဲ့အခါမှာ ဖုန်းကို Reboot ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ မလုပ်ပဲ ချိန်းလိုက်ပါ။ အဲလိုဆို မိမိတို့သုံးနေတဲ့ Myanmar fonts တွေ မိမိတို့ ထားထားသလို နေပါမယ်။ Fonts ထဲမှာ Default အပြင် အခြား Fonts တွေရှိနေပါက၊ အဲဒါတွေကို သုံးနေပါက Reboot ခိုင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ Myanmar zawgyi font ကို အဆင်ပြေသလို ထည့်ထားရတော့ Reboot မလုပ်ပဲသာ ချိန်းပါ။ အထက်မှာပြသလို Font က Default နေရာ ရွေးထားတဲ့အခါမျုးိမှာ ချိန်းမိရင် Reboot မတောင်းပါ။ အခြား Font ကို ရွေးထားမိနေချိန်မှာ တောင်းပါတယ်။ သည်တော့ မတောင်းတော့လဲ ပြီးတာပဲပေါ့။ Reboot တောင်းရင်တော့ Not Now သာ နှိပ်ချိန်းလိုက်ပါ။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းပေါ့….။
Reboot လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အခါမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ Font လေးကို ကိုယ်သုံးချင်တာလေးကို ဝင်ရွေးချိန်းပြီး Reboot လုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ..။ ဒါဆိုပြန်တက်လာရင် ကိုယ့် Font နဲ့ပြန်တက်လာတယ်ဆိုတာ သေချာစေတာပေါ့။ Fonts နေရာထဲ ဝင်ကြည့်လိုက် အစိမ်းရောင် အမှန်ခြစ်လေးက ကိုယ့် font နေရာမှာဆိုရင် ပြန်တက်လာရင် ကိုယ့် font နဲ့ဖြစ်နေမှာပါ။ Default ဆီရောက်နေရင်တော့ ပြန်တက်လာရင် Unicode တွေမှာ ဖြစ်မှာဖြစ်လို့ မိမိက Zawgyi သုံးသူဆိုတော့ ကိုယ့် Font ဆီကို ရွေးပေးပြိး Reboot ရတာပေါ့။ ဒါဆိုရင် အထာကျကျ အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေနေပါတယ်ခင်ဗျာ.. 😀
Font ရှိတဲ့နေရာ ဘယ်လိုဝင်မလဲ ဆိုရင်တော့ China ROM ဆိုရင်တော့ သည်လိုဝင်သွားချိန်းနိုင်ပါတယ်။
Global ROM မှာ ဆိုရင်တော့ Font ရှိသောနေရာ သည်လိုဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…။
App တွေနဲ့ Zawgyi font ဆိုတာကို လိုက်ထည့်ထားတာမျိုးတွေဆိုရင်ကတော့ Font list ထဲမှာ Preview လေးတွေ မြင်ချင်မှမြင်ရမှာပါ။ သည်တော့လဲ Default ဆိုတာကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ စုတ်တံပုံလိုလေးတွေနဲ့ဟာက Zawgyi font တွေလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ နှိပ်ဝင်ကြည့်ရင်တော့ Font နာမည်နဲ့ Preview လေးတွေကို မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုက Browser ကိစ္စ။ အဲသည်မှ လင့်တွေဝင်ကြည့်ရင် မမှန်လို့ဆိုတာမျိုးတွေ။ အဲလိုမျိုးတွေက Theme Fonts တွေ ချိန်းသုံးတာနဲ့ မဆိုင်လှပါဘူး။ မမှန်တဲ့ Browser က မှန်ကို မမှန်ပါဘူး။ Browser ရဲ့ Web View နဲ့ပဲဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်သတိထားမိသလောက် Global ROM တွေက Mi Browser မှာ မမှန်သလိုပါပဲ။ သူတို့က Global rom ဆိုတော့ System ရဲ့ Android System Web View ကိုပဲသုံးသလိုပါပဲ။ အဲဒါသည် Google product ဖြစ်လို့ System font ကိုပဲသုံးပါတယ်။ Root လုပ်ပြီး system font မှာ Zawgyi ချိန်းထားတာ မဟုတ်သရွေ့တော့ Unicode Font ကို ပဲ ယူသုံးမှာပါ။ ထို့အတွက် Zawgyi နဲ့ရေးထားတာတွေ ပေါက်ကရ ဖြစ်မှာပါ။ China rom က Mi Browser တွေကတော့ သူ့ Web View က Theme font ကိုသုံးလို့ ကိုယ်ကလည်း Zawgyi theme font ထည့်ထားတော့ အိုကေသည်ပေါ့။ Global rom က ကမ္ဘာအနှံ့ပို့တဲ့ဖုန်းတွေမှာ ထည့်ပေးတာဖြစ်လို့ Global rom မှာ Theme Font support မလုပ်ပါဘူး။ Region နေရာ Myanmar, India, နဲ့ အချို့နေရာလေးတွေ ထားပေးရင် Font လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ်တာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံက customer တွေ Request ကြောင့်လေးသာ ထည့်ပေးထားတဲ့သဘောပါ။ Browser app ကလည်း များစွာရှိပါတယ်။ Chrome ဆိုရင် Google product ဖြစ်လို့ Unicode font ဆီသို့သာ by force ပါပဲ။ ကျနော့် blog လေးဆို လူကြီးမင်းဖုန်းမှာ Myanmar font မရှိတာတောင် ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါက ကျနော့် blog မှာ ဝင်ကြည့်တာနဲ့ ကျနော်သုံးချင်တဲ့ Unicode font လေးနဲ့ပြပေးဖို့ လုပ်ထားတဲ့အတွက် လူကြီးမင်းဖုန်းမှာ ဘယ် font ပုံစံထည့်ထားထား ကျနော့် blog ဝင်ရင် ကျနော့် လုပ်ထားတဲ့ font ပုံစံနဲ့ပြပါတယ်။ လူကြီးမင်းဖုန်းမှာ ဘာ font မှ မရှိလဲရပါတယ်။ Facebook မှာ လင့်တွေနှိပ်တာနဲ့ စာတွေမမှန်ဘူးကလဲ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Web View ကြောင့်လဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲလိုဆို Facebook Settigns ထဲမှာ Links Open Externally ဆိုတာ ON ပေးထားရင် ဖုန်း Browser နဲ့ပွင့်ပြီး မှန်လာပါမယ်။ ဒါလဲ Browser မှာ မိမိဖာသာ လင့်တွေ ဝင်ကြည့်လို့ မှန်တာမျိုးမှပါ။ အစကတည်းက မမှန်ရင် မှန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော့် Blog လိုပုံစံပေါ့လေ။ Browser မှာ ဘာနဲ့ပဲရေးထားထား မှန်တာမျိုးလေး မြင်ချင်တယ်ရင် Firefox Browser မှာ MUA Addon လေးထည့်သုံးတဲ့နည်းနဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို Zawgyi , Unicode ဘာနဲ့ရေးထားထား ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပါမယ်။ သည် [–> Firefox + MUA Addon <–] Post မှာ လုပ်နည်းလေး ရေးထားပါတယ်။ သည်တော့ Browser မှာ စာတွေမမှန်လို့ဗျာဆိုရင် သည် font လေးသာသုံးလိုက်.. ကျနော်သုံးနေတာ .. အကုန်မှန်တယ်.. တစ်ဖက်သတ်ပြောမရပါဘူး…။ လူကြီးမင်းဖုန်းမှာ မှန်နေတာ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ flow လေးတွေနဲ့ ကိုက်ညီတာ ဖြစ်နေလို့ပါ။ မကိုက်ညီတဲ့ ROM version, Browser version, ကိုယ်သုံးတဲ့ Browser app တွေပေါ်မူတည်ပြီး ပုံသေ ပြောမရပါ။
Custom Themes တွေ ထည့်သုံးချင်တာမျိုးကတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ Theme mtz file ရှိရင် MIUI Theme Editor နဲ့သာ ထည့်သုံးကြည့်ပါ။ သည် [–> MIUI Theme Editor Tips <–] Link လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် MIUI Theme Editor အသုံးပြုပုံ tips လေးတွေ ထွက်လာမှာပါ။ လိုက်ဖတ်ပြီး လိုအပ်သလောက် idea ကို ယူလုပ်ပေါ့။ Theme ကိုဒေါင်းပြီးမှ ကြိုက်ရင် mtz file အနေနဲ့ထုတ်သိမ်းထားလိုက်တာတွေ လုပ်နိုင်တာပါပဲ။ font mtz တွေဆိုလဲ ထည့်တာ လုပ်နိုင်တာပါပဲ။ ကျနော့်အနေနဲ့ MIUI Theme Editor ကို မစမ်းဖြစ်တာ ကြာလှပါပြီ။ ခုနောက်ဆုံး Update တွေမှာသူ့ဟာသူ အစွမ်းထက်တာတွေ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ MIUI 9.5 စပြောင်းခါစက Xiaomi Policy တွေကြောင့် သူလဲ ဆက် Update မလုပ်တော့ပါ ဆိုပြီး Play Store က သူ့ App မှာ Comment ရေးထားခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဆက် Update လုပ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ် ပြောတဲ့သူလဲ ပြောကြပါတယ်။ သည်တော့ စမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ…။
အခုလောက်ဆိုရင်တော့ MIUI 9.5 နောက်ပိုင်း ဖြစ်လာတဲ့ Theme Policy လေးတွေ၊ ထည့်ခွင့်မပေးတာ ထည့်ထားလို့ ကြုံလာတတ်တာလေးတွေ..၊ ဘာပဲကြုံကြုံ ဘယ်လိုဖြစ်တာ ဘာကြောင့် ဘယ်လိုလေးလုပ်သုံးလိုက်ရင် အဆင်ပြေတယ် ဆိုတာလေးတွေ…စတာတွေကို နားလည်ပြီး လိုချင်သလို MIUI ကို အသုံးချတတ်ပြီယူဆပါတယ်။ MIUI မှာ China ROM, Global ROM, Stable, Beta ဆိုတာတွေရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အနည်းငယ်ကွာခြားတတ်တာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူများက ဘယ် rom, ဘယ် version နဲ့ ဘယ်လိုပုံစံအခြေအနေမှာဖြစ်နေတာလဲမသိပဲ ကျနော်တို့တော့ သည် app နဲ့လုပ်လိုက်တာ ရနေတာပဲ ဆိုပြီး ပုံသေပြောမရပါဘူး။ Conditions တွေကိုက်ညီနေချိန်လေးမှာ ခဏလေးစမ်းပြီး ဒါနဲ့အကုန်ပြေတယ်ဗျ ပြောမရပါဘူး.. သူလုပ်တာနဲ့ ကိုယ်လုပ်တာ တူချင်မှတူမှာပါ။ ကိုယ်က Condition မကိုက်ချိန် မရောက်သေးတာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ….။ MIUI 10 ရတယ်ဆိုတာချင်းတာတောင် သူ့ဖုန်း model က 10.1.2 ဆိုတာလိုဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဖုန်း Model က 10.2 ဆိုတာလိုဖြစ်နေတာပါ။ Model ပေါ်မူတည်ပြီး rom မှာလဲ အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိမှာပါ။ Model ချင်းတူတောင် Global rom မှာ တစ်မျိုး China rom တစ်မျိုး ရှိတတ်တာတွေပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် MIUI သဘာဝလေးတွေကို နားလည်ထားရင် ဒါလေးဖြစ်တာ ဒါကြောင့်.. ဒီလိုလေးလုပ်သုံးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားတာပေါ့လို့ ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ရင် အခက်အခဲမရှိ အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေစေမှာပါ……။
MIUI Funs များ စိတ်ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ….. 🙂